Mashaariicda DIY si dib loogu warshadeeyo qalabka CD / DVD - Ikkaro
Inicio >> Dib-u-warshadaynta elektaroniga iyo farsamada dheryaha >> Mashaariicda DIY ee dib-u-warshadaynta qalabka CD / DVD
Mashaariicda DIY ee dib-u-warshadaynta qalabka CD / DVD
Maanta waa wax caadi ah in guriga lagu haysto ciyaartoydii hore ee CD-ga ama DVD-yada oo aynaan mar dambe adeegsan oo weyn isha qalabka mashaariicdeena DIY.
Waxaan kala soocayaa qalabka CD-ga si aan u arko qaybaha aan ka faa'iideysan karno oo waxaan uga tagayaa liistada mashaariic aad u xiiso badan (tilmaamo) oo lagu samayn karo qaybo kasta. Xidhiidhyadu waa mashruucyo af Ingiriisi ah, laakiin inyar oo ka dib waxaan isku dayi doonaa inaan soo saaro oo aan uga tago dhammaan dukumintiyada Isbaanishka.
Qaabkani waa mid duug ah. Waxaan u maleynayaa inay wali shaqeyneyso, laakiin maadaama aan haysto 3 ama 4 ka badan waxaa loo huray maqaalka :)
Kala-fur, dib-u-warshadayn oo dib u isticmaal akhristaha CD / DVD
Intaadan waalin wax walba waxay soo baxaan ayadoon la qasbin, sidaa darteed haddii qayb kasta oo aadan ka saari karin ay sabab u tahay inaadan ka saarin dhammaan boolal iyo / ama tabs. Ha ka dhigin idaha adoo jeexa jeexaya.
Waxaan bilaabay inaan si taxadar leh u furno. Micno badan ma samaynayso inay ku siiso tilmaamaha ku saabsan sida loo furo, maaddaama qaab kasta loo sameeyo qaab ka duwan. Midkani wuxuu la yimid 3 tab oo yaryar, oo mar dhaqaaqay, u oggolaaday mid ka mid ah daboolka aluminium inuu dhaqaaqo.
Waqtiguna waa arin si deggan uga qaad qaybaha illaa aan ka gaadhno aagga gudaha oo ah kan xiisaha leh.
Ha tuurin boolal, waxba ha tuurin. Keydso inaan dib u isticmaali karno wax walba ;-)
Halkan waxaan horeyba uga mahadcelinnay leysarka iyo matoorka bilaa burushka ah ee mas'uulka ka ah wareejinta CD-ga. Waxaan sii wadeynaa inaan ka saarno boolal dhinacyada, si aan awood ugu yeelano inaan qaybaha si wanaagsan u galno. Sida ugu dhakhsaha badan ee aan kari karno, waxaan sidoo kale uga sooci doonnaa guddiga korantada.
Ma jiraan wax dib u eegis ah. Waxaan sii wadaynaa saxanka hada, Kama tagin wax xiriir ah oo aan dib u adeegsado. Waqtigan la joogo aniga kaliya ayaa igu soo dhacaya inaan ka saaro qaybaha si aan dib ugu isticmaalo, in kastoo dhammaantood kuwa SMD markaa aad ayey u adag tahay in laga faa'iideysto. Waxaan jeclahay lugaha yar yar ee buuran intaan noolahay.
Kala-jajabinta kala-baxa adiga oo aan horeyba uga saarnay qaybta xiisaha leh ee akhristaha, waxaan si faahfaahsan u sharraxayaa sawirka
Farsameynta CD-gaHoos u fiiri dhinaca midig waa mooto yar oo aan hadda ku arki doonno dhinaca dambe.
Mashiinka nidaamka meeleynta laser (Casharka ayaa halkan nooga tagay, maxaa yeelay waxaan filayay talaabo talaabo ah oo furka kuxiran)
Haddaan tan gadaal ka aragno
Waxaan haynaa qayb cusub, nambarka 5aad, oo ah matoorka ka dhigaya nidaamka furitaanka CD player inuu shaqeeyo, 6,7 iyo 8 waa buraash la’aan, leysarka iyo mootada gadaasheeda.
Waa hagaag, haddii aad rabto inaad si cad u hesho
Waan sii wadi karnaa kala daadinta. Sababtoo ah tani waa joogsi la'aan, xitaa markaa waan awoodnaa kala jeexjeexa leysarka, burush la’aanta iyo dhismaha oo dhan, laakiin illaa hadda ma tagayo oo waxaan ka tegayaa qaybaha oo dhammaystiran, taas oo ah waxa aan ugu baahan doonno mashaariicda lagu taliyay
Mashruucyada 'DIY' ee leh qaybo CD / DVD-ga dib loo rogay
Oo hadda waxaad sugaysay, kuwa Mashruucyada 'DIY' ee lagu sameeyo qaybaha akhristaha. Hagaag, mashaariicda qaar waxay ubaahan yihiin qaybo dheeri ah, kuma koobna oo kaliya akhristaha, tusaale ahaan way kuu fududahay inaad ubaahantahay guddiga Arduino, ama farsamada 3 CD / DVD Hadana haddii aad samaynaysid makiinad yar oo 3D-daabac ah, waxaad u baahan doontaa dabcan mid dabcan ah.
Hagaag, waxaan ku qaatay burburinta oo waxaan haysanaa dhibaato ah inaanay jirin talaabo talaabo ah, laakiin fiiri waxaad ku samayn karto qaybahaas iyo qaab-dhismeedkan.
Ninka Miskiinka ah ee Daabacaha 3D ah
Xardho jeebka jeebka
Daabace ka socda akhristaha CD-ga
Si aad ugu shaqeyso burush la'aan, kuma filna inaad ku xirto korantada iyo sida mashiinka caadiga ah ee DC, waxaan u baahan doonaa wadayaasha qaar si ay si sax ah ugu shaqeeyaan.
Arduino CDROM BLDC Darawal Mooto
Sidoo kale waa wax caadi ah in la sameeyo anemometer. Waxaan ka tagayaa anigoo sugaya inaan iska furo buraashka oo aan arko waxyaabo badan oo xiiso leh oo ku saabsan matoorrada noocan ah.
Iyada oo mootada stepper ah
Hagaag, sidaan idhi, waxaan filayay inaan helo a motor stepper sida kan aad ku arki doontid casharrada, oo leh silsilad aan dhammaad lahayn oo ku lifaaqan, waxaan rajeynayaa inaad iga nasiib badan tahay, hehe
Arduino Mini Laser Paper magaabay
Qarsoodiga qalinka yar ee Arduino
MicroSlice-ka | A magaabay yar laser Arduino
Ka taxaddar leysarka, indhaha iyo maqaarka, waxay noqon kartaa mid khatar badan waxayna sababi kartaa dhaawac aan laga soo kaban karin. Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, ha sameynin mashaariicdan.
Tilmaame Laser Guriga Lagu Sameeyay
Module Laser oo Guriga lagu Sameeyo
Taasna waxaan ku dhammeyneynaa akhristaha. "Waxaan balan qaadayaa" in aan sameeyo talaabooyinka talaabo talaabo talaabo ah sidii looga bartay Ikkaro. Ma ogtahay wax intaa ka badan oo xiiso leh?
Sida caag looga sameeyo caano ama Galalith
Xalka: avrdude: ser_open (): ma furi karo aaladda Arduino
Soo kabashada kombiyuutar Linux duug ah
Koorsooyin lagu baranayo Mashiinka Barashada, Barashada Qoto dheer ...
Categories Dib-u-warshadaynta elektaroniga iyo farsamada dheryaha Tags Laser Tigidhka tigidhka
Khiyaamada iyo hacks-ka si sawirro looga qaado
Waxa la fiirinayo si loo iibsado daabacaad 3D ah
Faallooyinka 13 ee ku saabsan "mashaariicda DIY ee dib-u-warshadaynta qalabka CD / DVD"
Sebtember 3, 2014 at 5:09 pm
Gut the Roomba man oo akhristayaasha ka jooji '90s!
Sebtember 3, 2014 at 5:13 pm
haha, wax yar i sii, maalmo yar baan ku dhejin doonaa :) Aan aragno haddii aan ka dhigo mid shaqeynaya ama waxa. Laakiin waxaan heystaa 4 ama 5 CD ama DVD oo waa inaad ka faa'iideysataa ;-)
Sebtember 12, 2014 at 4:17 pm
Muddo dheer ayaan ka daba socday boggan si qarsoodi ah (muddo ku filan), waan jeclaan lahaa
Sebtember 12, 2014 at 4:18 pm
Anigu waxaan raacay boggan si qarsoodi ah muddo dheer (muddo ku filan), waxaan jeclaan lahaa inaan ku caawiyo boggan adoo soo gelinaya waxyaabaha la soo saaray. Ma i siin kartaa hordhac DIY iyo buugaag injineernimo? Aad ayaan ugu cagaarnahay tan, laakiin fikrado wanaagsan oo raba inaan wax barto, waxaan qabaa, inay meel fog marayso! :)
Oktoobar 28, 2014 markay tahay 2:06 pm
ka fiican DIY buugaagta ama elektarooniga guud ahaan, waxaan u maleynayaa inaad diirada saareyso mashaariicda aad jeceshahay inaad sameyso halkaasna aad ka baarto waxa aad u baahan tahay oo aad barato elektarooniga, makaanikada, barnaamijyada aad ugu baahan tahay
Waxaad heli doontaa baashaal intaa ka sii badan markaad ogaato waxaad noqon doontaa khabiir ;-)
Noofambar 5, 2014 markay ahayd 12:04 am
Waxaan ku tijaabinayaa matoorkeyga cadayga diyaaradda rc, waxaan arki doonaa sida ay wax u socdaan, gadaal baan kuu sheegi doonaa.
Janaayo 8, 2015 markay ahayd 8:47 pm
Iyo xeelad caadi ah laakiin layaableh waa in la isticmaalo muraayadaha indhaha. Cabir ahaan waa sida muraayadaha indhaha, waana fududahay in lakala baxo ... Way fududahay galaaska weyneeya ama mikroskoobka haddii ay ku dhagan tahay wax ku dhegan sawir kasta oo yar ama kamarad fiidiyow ah, sida webcam, ama kaniini ama taleefan . Si ballaaran ugu filan cayayaanka, u fiirso adduunyo yaryar oo aad naftaada ku madadaaliso sawir qaadista ...
Maarso 27, 2015 markay ahayd 10:50 pm
Waxaan u arkaa maqaalladaadu kuwo aad u xiiso badan.
waxaad isku dayi laheyd inaad sameysato calaamadeeye laser
Diseembar 2, 2015 at 4:14 am
fadlan waxaan jeclaan lahaa inaad maamusho mootada Burushka, fadlan ii sharax
Febraayo 10, 2016 markay ahayd 7:25 pm
Galab wanaagsan, waan aqriyay boostada, sababtoo ah waxaan kala diray akhristayaal badan waxaanan doonayay inaan arko tusaalahaas, tan iyo markii aan u xiisay mootada dhajiska leh auger ku lifaaqan, waa inaan ka faaloodaa waxa ugu badan ee caadiga ah, sida ay yihiin kuwa aan gutti , taasi waxay la mid tahay midda sawirka ka muuqata, halka haddii aad xuub ku waddo waddo floppy ah, waxaad caadi ahaan ka heleysaa iyaga oo leh auger ku lifaaqan Waxaan rajaynayaa in haddii wax kuu hadhay oo aad u baahan tahay mishiinka, aad xaqiijin doonto, maxaa yeelay guud ahaan anigoo ku salaynaya waayo-aragnimadayda inta badan unugyada ayaa adeegsada
25-ka May, 2016 saacaddu markay tahay 11:07 pm
Waad salaaman tahay, su'aal baan qabaa, ma fahmin adduunka arduino inbadan, wax yarna kamaqabaan darawalada, marka waxaan waydiiyaa ... miyaan isticmaali karaa darawal pololu a4988 ah halkii aan ka isticmaali lahaa fududeeyeyaasha ku xusan boostada? maadaama aan helayo kala bar qiimaha.
February 23, 2019 at 12:23 waxaan ahay
Waxaan xiiseynayaa inaan dib u isticmaali karo CD-ROM-yada si aan u dhagaysto muusikada (iyo xitaa inaan u diro calaamadaha fiidiyowga shaashadda). Waxaan u maleynayay in guddiga Arduino, aan xakameyn karo howlaha, laakiin kama helin wax wadar ah oo ku saabsan. Qof kasta oo aan arkay ayaa ka hadlaya hub ka dhigista akhristayaasha.
Ogast 29, 2019 at 2:06 am
Kala daadinta wax walba waxaa sameeya qof kasta laakiin wax ku qabashada qaybaha waa caqabadda
1 Kala-fur, dib-u-warshadayn oo dib u isticmaal akhristaha CD / DVD
2 Mashruucyada 'DIY' ee leh qaybo CD / DVD-ga dib loo rogay
2.1 Iyadoo farsamada
2.2 Mashiinka Brushles
2.3 Iyada oo mootada stepper ah
2.4 Iyadoo laser